Cycas nwere obi ụtọ na mmega ahụ na Switzerland
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Cycas nwere obi ụtọ na mmega ahụ na Switzerland
Akụkọ dị iche iche
Ụlọ ọbịa nke Cycas na-aga n'ihu na-akwalite mmemme mgbasawanye ya dị oke egwu, ebe ọnwa a bịanyere aka na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Switzerland mbụ ya.
Ụlọ ezumike nke 119 Holiday Inn Express & Suites Sion ga-arụ ọrụ site na onye ọrụ pan-European na-enweta ihe nrite n'okpuru nkwekọrịta mgbazinye mbụ ya na otu ntinye ego nke Credit Suisse Asset Management.
Cycas na IHG Hotels & Resorts emekọrịtala ọnụ iweta echiche ezumike ezumike nke abụọ na Switzerland.
Pọtụfoliyo Cycas na-ekpuchi mba Europe 6 - Belgium, France, Germany, Netherlands, Switzerland, na UK.
Mgbe ọ ga-emepe n'oge mgbụsị akwụkwọ 2024, ụlọ ọhụrụ a na-ewu ụlọ ga-enye ngwakọta nke ụlọ ezumike Holiday Inn Express 95 na ụlọ iri abụọ na anọ nwere kichin site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Sion, yana ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'elu ala iji nweta ohere ya dị egwu n'ime ụlọ. ọhụrụ Cour de Gare district na site ọhụrụ concert ụlọ. Ndị ọbịa ga-enwekwa ike iji ohere mgbatị ahụ 24/24 na ọnụ ụlọ nzukọ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ga-adị n'etiti nnukwu mmepe azụmahịa nke ezubere iji mee ka ọnọdụ Sion dị ka ebe akụ na ụba na azụmahịa nke mpaghara ahụ ma jikọta etiti obodo na-agbanwe agbanwe na obodo ochie ahụ.
Ọrụ Cour de Gare ọhụrụ, nke Comptoir Immobilier na-edu, ga-achịkọta ihe karịrị 10,300m² nke ụlọ ọrụ, ụlọ 300 na 5,700m² nke oghere mkpọsa. Mgbagwoju anya a ga-etinyekwa otu n'ime egwu egwu na ụlọ ọgbakọ ogbako kachasị na Valais canton - nke agbakwunyere na nkwari akụ - gbakwunyere ebe a na-adọba ụgbọala n'okpuru ala maka ụgbọ ala 625.
A na-edobekwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ nke ọma maka ụlọ ọrụ nyocha sayensị nke EPFL Valais Wallis - ebe kachasị mma nwere ndị ọrụ 400 - nke gụnyere ụlọ akwụkwọ Energypolis School of Engineering.
Dị ka isi obodo Valais - otu n'ime mpaghara njem nlegharị anya Switzerland - ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ a dị mma maka iji ohere egwuregwu ski a ma ama na Europe. Ndagwurugwu anọ, mpaghara ski kasị ukwuu nke Switzerland, bụ naanị ụgbọ ala nkeji iri atọ, mana enwere ike ịnweta ya karịa n'ime afọ ole na ole nke imeghe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụrụ na ọrụ ụgbọ ala ụgbọ ala ọhụrụ echere na-aga n'ihu na-enye njikọ nkeji iri abụọ kpọmkwem site na agbata obi ọdụ na mkpọda.
Sion dịkwa ihe dị ka elekere Zermatt, Verbier, Chamonix Mont-Blanc na Portes du Soleil. Ọ bụ mpaghara ski nwere njikọ kacha ukwuu n'ụwa.